တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကျမနှင့် ယောဂ
Posted by မေဓာဝီ at 9:21 PM
အမနော်..ဒါဆို ၀သွားလိမ့်မယ်..သူငယ်ချင်းလေ..ကစားပီး မောလို့တဲ့ပြန်လာတိုင်းစားတော့ ပိုဝသွားတယ်.
ကျေးဇူးပါ..ကျနော်လဲ ယောဂ ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်..
1/10/2008 11:23 PM
ကျနော်လဲ တချိန်တုန်းက စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး စာအုပ် စီဒီတွေဝယ်ပြီး တစ်ခုမှ မလုပ်ဖြစ်ဘူး :P
1/11/2008 12:34 AM
သူများတွေက Yoga နဲ့ ပိန်အောင်လုပ်ကြသတဲ့။ မမေက Yoga လုပ်ပြီး ပိုစားကောင်းလာတယ် ဆိုတော့ တော်ကြာ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေဦးမယ်နော်...=P
1/11/2008 2:09 AM
အားပေးတယ်မေရေ...ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း တခုခု ပုံမှန်လုပ်တာ ကောင်းပါတယ်...တို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တယောက် ယောဂ ကစားတာ ၂လ လောက်ကြာတော့ အသားအရေရော ခန္ဓာကိုယ်ပါ ပိုပြီးစိုပြေ လှပ လာတာ တွေ့ဘူးတယ်...။
1/11/2008 2:16 AM
ယောဂကျင့်ရင် ကျန်းမာတယ်လို့ ကြားဘူးတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ပျော့ပျောင်းဖို့တော့ လိုမယ်ထင်တယ်နော်။ ပုံတွေကြည့်တာနဲ့ လွယ်မလိုနဲ့ အတော်ခက်တဲ့ ကျင့်စဉ်ဘဲလို့ သတိထားမိတယ်။
1/11/2008 4:31 AM
ဗိုလ်မင်းဟံ ရဲ့ သင့်ဘ၀အတွက် ယောဂကျင့်စဉ် ကို ဖတ်ကြည့်ပါလား။ အနောက်တိုင်းနဲ့ အရှေ့တိုင်း အများကြီး ကွာတယ်။
ကစားဖူးတယ် ဆက်လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်
ပိန်သွားရင် အရင်ပုံနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်ပေးနော် ဟီးး
1/11/2008 3:18 PM
ကျနော်ကတော့ ယောဂသင်တန်းသွားတိုင်း အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ လျှော့ချတာများ သွားလို့လားမသိဘူး... တရှူးရှူးနဲ့အိပ်ပျော်သွားတတ် လွန်းလို့ အားလုံးထဲမှာ ရှက်ရတာလဲ ခဏခဏပါပဲဗျာ၊ :-)
1/12/2008 12:07 AM
ကျွန်မတော့ ယောဂ ကျင့်ဖို့မပြောနဲ့ အစ်မရေ......
မယ်သီလရှင်ဝတ်တုန်းကတောင် တရားကောင်းကောင်းမထိုင်နိုင်ဘူး.. ငြိမ်ငြိမ်နေလို့ကို မရတာ...
ကွန်ပြူတာရှေ.မှာတော့ ရတယ်.. ဟီးဟိး
အဲ့လိုပဲ အကျင့်က မကောင်း...
1/12/2008 6:17 AM
Ma May comment ka yayy loh ma ya buu ma may yae. . email bae pho htar tae thi lar..
1/13/2008 4:39 AM
Postအသစ်တွေ မတွေ့တော့ မေများ နေကောင်းရဲ့လားလို့ စိတ်ပူလို့ပါ။ Take Care.
1/14/2008 12:36 AM
ဒါဆို ပိုဝဘို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ ဟဲဟဲ ကြိုဆိုကြပါစို့။
1/14/2008 5:22 AM
ယောဂကျင့်တာ ကောင်းတယ်နော်။ အကြောအချဉ်တွေလည်း ပြေမယ်ထင်တယ်။ အစာလည်း ပိုစားတော့ ပိုပိုဝလာပေါ့။ ဒီတော့လည်း ၀လို့လှလို့နဲ့ အဆင်ပြေသွားရော..။ ဟီးဟီး အဆင်ပြေပါစေ။
1/15/2008 11:34 AM
အမှတ်မထင်ဖတ်လိုက်တာ ကျမနှင့်ပယောဂ ဆိုလို့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပလဲထင်တာ ဟဲ :) . တော်သေးတာပေါ့ ယောဂဆိုလို့။ စွတ်ရမ်းလုပ်မနေနဲ့နော်။ အသက်ကကြီးပြီ :) မတော်လွဲကုန်လို့ စောင်းငန်းစောင်းငန်းနဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်နေရမယ်။ ဟဲ
I called ur mobile phone for one week... but no answer...network said ... the mobile phone u have called, this will stop,,pls call again later.... whenever i call u ,, i am replied like that.. did u change ur number.. or what happen to u???? why are u away from ur blog.. why are u away from ur mobile phone... don't make us to worry u... at least.. if u have some critical situation or crisis, u should leave short message here why do u pause ur blog like this, don't u???
now there is no clue .... :(
1/20/2008 6:26 AM
ပို့စ်အသစ် မရေးဖြစ်ဘူးလား မမေ။ အလုပ်များနေလားဟင်။ သတိရလို့ လာအော်သွားပါတယ်။
1/20/2008 9:11 AM
ယောဂ အကြောင်းလေး မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သူက ကျန်းမာရေး အတွက်တော့ တော်တော် ကောင်းမယ်နော်.. အမပြောသလိုပဲ အစပိုင်းမှာ လိုက်လုပ်ရတာ တော်တော် ခက်မယ်ထင်တယ်
i can not call ur mobile phone.. what's wrong with u??? it's about over one week.... why are u away from ur blog?? why are u away from ur phone... at least, u should leave short message here why u can't go on...now we have to concern u somehow.... :(
naughty old lady... ;P
ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်တာ ရုတ်တရက် ပယောဂများလားလို့၊ ဩော်.. ကလူသစ်လည်း အဲလိုထင်နေတာကိုး၊ ဖြစ်ရမယ်။
တခုခွင့်တောင်းချင်ပါတယ်၊ ကျနော်မမေဓာဘလော့ဂ်က မြန်မာစာသတ်ပုံတွေ၊ ပါဌ်ဆင့်ရေးသားပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တချို့ကို ကျနော့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ကူးထားချင်ပါတယ်၊ ခွင့်ပြုမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဦးဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်အရင်က မေးခဲ့ဖူးတဲ့ သတ်ပုံပို့စ်ကို http://degolar.blogspot.com/2008/01/blog-post.html မှာ ကူးထားပါတယ်၊ အဆင်မပြေရင် ကျနော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ့မယ်။
1/21/2008 6:36 PM
အစ်မ စာတွေနဲ့ အလုပ်များနေတာ ထင်တယ်။ လာလည် သွားပါတယ် ခင်ဗျာ။
1/22/2008 12:04 AM